I-Apple Music ihlawula amagcisa aphindwe kabini njengeSpotify | Ndisuka mac
U-Apple upapashe inqaku kwiApple Music for Artists application, iqonga apho onke amagcisa afumanekayo kweliqonga anokufikelela, kunye nenani elikhulu leenkcukacha, kwiingoma ezidlalwa kweli qonga, ezaphukileyo lilizwe. , iingoma, iialbham Kunye nengeniso abayivelisayo de le nkonzo.
Kule leta, uApple uthi ubhatala idenariyo ngengoma nganye edlalwayo kwiqonga labo Kwaye i-52% yengeniso yobhaliso iya kumagcisa, ewe, ngakumbi kwiileyibhile zokurekhoda, ukuze ekugqibeleni amagcisa afumane isixa esisezantsi kakhulu.
Kule nqaku, ifikeleleke kwiWall Street Journal, uApple uthi ifuna njalo Iinkcukacha ngendlela ntlawulo, inqaku elipapashwe ngaxeshanye ukuba i-United Kingdom ibhengeze ukuba iphanda ukuba iinkonzo zokusasaza umculo zilungile ngokwenene na kubazobi.
Njengoko ingxoxo malunga nokusasazwa kwemali yasebukhosini iqhubeka, sikholelwa ukuba kubalulekile ukuba sabelane ngamaxabiso ethu. Sikholelwa ekuhlawuleni umenzi ngamnye umrhumo ofanayo, ukuba umsebenzi unexabiso kwaye abadali akufuneki bahlawulele umculo okhuthazwayo.
Iintlawulo kwiSpotify zintsonkothe ​​ngakumbi Kuba zibandakanya zombini ezo zifunyenwe kwimirhumo (okwangoku inezigidi ezingaphezulu kwe-150 zeerandi) kunye nabasebenzisi benguqulelo yasimahla eneentengiso.
Ijenali yeWall Street ithi i-Spotify ihlawula phakathi kwama-50 nama-53% kumagcisa, nangona kunjalo, ngokomndilili, inkampani yaseSweden Uhlawula malunga nesiqingatha sale Apple kuveliso ngalunye. Nangona kunjalo, i-Spotify ihlawula ngaphezulu kwe-Apple ngenxa yenani eliphezulu lababhalisi abathi, kunye nabasebenzisi benguqulelo yasimahla, badibanise ukuya kwizigidi ezingama-345.
Ixesha lokugqibela u-Apple wabhengeza amanani obhaliso, kwakuphakathi ku-2019, xa elo nani ukuba ibiyi 60 millones. Kwasekuqaleni konyaka we-2020, iAmazon ibanga ukuba, phakathi kweenkonzo ezahlukeneyo zokusasaza umculo, yayinezigidi ezingama-55 zabasebenzisi abasebenzayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple Music ihlawula amagcisa aphindwe kabini njengeSpotify